Fanokafana ny taom-pitsarana : Tokony ho tazana eo anivon’ny fitsarana ny fisandratana -
AccueilRaharaham-pirenenaFanokafana ny taom-pitsarana : Tokony ho tazana eo anivon’ny fitsarana ny fisandratana
27/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
« Mila taratra eo anivon’ny fitsarana malagasy ny Fisandratana » io no fijery nozarain’ ny Filoham-pirenena omaly tetsy amin’ ny lapan’ny fitsarana Anosy, nandritra ny fanokafana tamin’ ny fomba ofisialin’ ny fotoam-pitsarana ho an’ny taona 2018, izay niara-dalana amin’ ny fianianana izay notanterahin’ny filohan’ny fitsarana fandravana teo anivon’ny fitsarana an-tampony, Raketamanga Odette Clementine, sy ny tonia mpampanoa lalàna ambony eo anivon’ny fitsarana fampakarana eto Antananarivo, Andriamiseza Charles. Tsiahivina hatrany fa talohan’ izao fanendrana izao dia filohan’ ny filankevitry ny fitsarana fandravana tetsy Anosy i Raketamanga Odette Clementine, ankilany kosa i Charles Andriamiseza, dia minisitry ny Fitsarana sady mpitahiry ny fitombokasem-panjakana alohan’izao fanendrena azy izao. Anisan’ ny fianianana izay nataon’ireo mpitsara ambony ireto ny hitandro tahaka ny anakandriamaso ny adidy sy ny asa izay ankinina amin’ izy ireo manaraka ny lalàna velona izay misy eto amin’ ny repoblikan’ i Madagasikara, eo ihany koa ny fitadiavana ny marina, izany dia ao anatin’ny fanjana ny tsiambarantelon’ny fampanoavana.
Nambaran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa ny andro omaly dia mampatsiahy ny fandraisana andraikitra goavan’ny fitsarana, ary indrindra ny mpitsara. Notsipihin’ny Filoha tamin’ izany ny fanajana ny fototra ny fitsipiky ny fototry ny asa ny mpitsara. Ny fitsarana rahateo hoy ny filoham-pirenena dia andrin’ny fampanajana ny tany tan-dalàna sy ny fiandrianam-pirenena. Noho izany dia nilaza ny filoha fa « tena ilaina ny fampiharana ny lalàna misy eto amin’ ny tany sy ny firenena, ary tokony hajain’ny olom-pirenena tsirairay izany, mba ahafahana tonga any amin’ ny fitoniana sosialy maharitra, ary indrindra ny fanarenana ny asan’ny mpitsara sy ny fitsarana malagasy. Ny mpitsara dia tompon’andraikitra ary fitaratra eo anivon’ny fiarahamonina . Izany dia mendrika sy mitaky fahaiza-manao mba haha toteny ny mpitsara eo imason’ ny vahoaka » hoy hatrany ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Noho izany ny mpitsara dia tokony hametaka ny heriny sy ny fomba fijerina amin’ny fisandratana, izany dia ahafahana mamarana ny fahantrana sy ny endrika tsy fitoviana sy ny tsy fandriam-pahalemana eto amin’ ny firenena.
Taorian’ny fahavitan’ny fianianana, dia niroso avy hatrany tamin’ny fametrahana amin’ ny fomba ofisialy ny fametrahana an’i Raketamanga Odette teo amin’ ny toerany, ho an’ ny tonia mpampanoa lalàna ambony kosa izany hoe Charles Andriamiseza, dia hotanterahina amin’ ny fotoana manaraka ny fametrahana azy amin’ ny toerany. Ny lanonam-pitsarana kosa no natrehan’ireo olona ambony teto amin’ny firenena, dia teo ny praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, ny minisitry ny Fitsarana, ary ireo fianakaviamben’ny fitsarana manerana an’i Madagasikara.
yetkili servis dans « Insécurité publique et disfonctionnements de nos institutions »
Raharaha 4 miliara tao amin’ny « Jirama » : Tsy afa-miala i Mamy Ravatomanga
Ny volana Septambra 2015 no tokony notanana teny amin’ny « Chaine pénale anti-corruption » i Mamy Ravatomanga, hatao famotorona momba ny fakam-bola am-pitaka nataony tao amin’ny Jirama. Tsy nisy asa nataony akory kanefa nahavita nampandoa volabe 4 ...Tohiny
Fampandrosoana : Vonona hanampy ny Japoney
Senatera Berthin Randriamihaingo-« TENA MIASA NY FITONDRANA »
yetkili servis: https://burcyorumutr.wordpress.com/